तीजको ‘लहर’ हैन ‘रहर’ : तपाईँ पनि यो चर्चित गीतका शब्दहरुमा झुक्किनुभएको त छैन? « Mysansar
« मदन पुरस्कारका लागि पुस्तकहरु कसरी छानिन्छन् र पुरस्कार घोषणा कसरी हुन्छ? यस्तो रहेछ प्रक्रिया
विश्वलाई नै मूर्ख बनाएको त्यो एउटा ‘मिसन’ »
तीजको ‘लहर’ हैन ‘रहर’ : तपाईँ पनि यो चर्चित गीतका शब्दहरुमा झुक्किनुभएको त छैन?
By Salokya, on August 20th, 2020
यस पटकको तीज घरै बसेर मनाउनु पर्ने स्थिति आएको छ कोरोना भाइरसका कारण। यो पालि ‘सोचे झैँ जिन्दगी रैनछ..’ भन्ने गीत अलि चल्यो। तर सदाबहार गीत त उही ‘तीजको रहर आयो बरी लै’ नै हो। यति धेरैले मन पराएको र हरेक वर्ष बज्ने गीत भए पनि अचम्मको कुरा के भने यो गीत धेरैले गलत गाउने गर्छन्। यो गीतका वास्तविक शब्दहरु धेरैलाई थाहै छैन।
गीतको सुरुको बोलदेखि नै गलत बुझाई छ। खासमा ‘तीजको रहर आयो बरी लै’ हो। तर कतिपयले गाउँदा ‘तीजको लहर आयो बरी लै’ पनि भन्ने गर्छन्। तीजको ‘लहर’ त कसरी आउँछ र, ‘रहर’ चाहिँ आउने हो।
तँ बढी जान्ने भएको? तँलाई चाहिँ कसरी थाहा भो के हो भनेर सोध्नुहोला। यो गीत लेख्ने चेतन कार्की हुन्। उनैले भनेको कुरा त पत्याउनु हुन्छ होला नि। कार्कीले नै यहाँ भने अनुसार ‘तीजको रहर’को अर्थ माइती जाने, आमा भेट्ने, घरको गुनासो गर्ने, दर खाने आदि हो।
गीत सुरु हुन्छ ‘गा‍‍औँ स्वर खोलेर दिदी र बहिनी’बाट।
तर यसलाई केहीले ‘गाउँ सहर खोलेर’ देखि ‘गाउँ सहर छोडेर’समेत गाउने गरेका छन्।
‘गाऔँ स्वर खोलेर दिदी र बहिनी’ पछिका शब्दमा पनि कन्फ्युजन धेरै छ। धेरैले ‘नाचौँ न मिलेर नाम लिई सैनी’ भन्ने गर्छन्। त्यसो हैन, गीत लेख्ने चेतन कार्कीका अनुसार ‘नाचौँला मिलेर दामली सैनी’ हो।
के हो त दामली भनेको? नाम लिई भनेको भए अर्थ पनि छ। दामलीको अर्थ के ?
गीतकार कार्कीका अनुसार ‘दामली’को अर्थ ‘उमेर मिल्ने कोही’ हुन्छ। अनि सैनी भनेको नि?
सैनीको अर्थ भने गण्डक क्षेत्रमा ‘मितिनी’ हो।
अर्थात् गीत यस्तो हैन-
गाउँ सहर छोडेर दिदी र बहिनी
नाचौँ न मिलेर नाम लिई सैनी
गीत यस्तो चाहिँ हो
गाऔँ स्वर खोलेर दिदी र बहिनी
नाचौँला मिलेर दामली सैनी
म्युजिक नेपालले अहिले त गीतको लिरिकल भिडियो समेत बनाएको रहेछ-
August 20th, 2020 | Category: समाचार/विचार | |
4 comments to तीजको ‘लहर’ हैन ‘रहर’ : तपाईँ पनि यो चर्चित गीतका शब्दहरुमा झुक्किनुभएको त छैन?
Sahar nai suninchha
Gayikako uchharan le nai sabailai Sahar lageko hola
Aru uchharan thik chha
तर Lyrics मा त फेरी :
नाचौँ न मिलेर नाम लिई सैनी देखियाे त ???
अलि राम्रोसित हेर्न परो दामली सैनी नै लेखिएको छ त।
एकजना गाउनेको नाम चाहिं नेपालीमा सुषमा श्रेष्ठ रे अंग्रेजीमा उसको नाम सुस्पा श्रेष्ठ रे। … हैट म्युजिक नेपाल पनि कस्तो जोकर
gostosas dando o cuzinho dordoz.com acompanhantes goianas homens sex chuporn.net morena boa videos caseiro sexo xxxvideo.name levando rola bunda gostosa praia xlxx.pro video de sexo famosas filmes pornôs brasileiro kompoz.me xvideos atores
novinha gozando no quintal liebelib.net bucetinha rosada novinha dp anybunny.mobi sambapornol comendo uma travesti nesaporn.mobi luxuria porno esposas gustosas ar.kompoz.me nu bbb sexo com patroas tubetria.mobi brasileirinhas traindo o namorado